Galilea (faritra) - Wikipedia
I Galilea na Galilia dia faritra ao amin' ny tapany avaratr' i Israely, izay eo anelanelan' ny Ranomasina Mediteranea ao andrefana sy i Siria ao avaratra ary ny lemak' i Esdrelôna ao atsimo.
3 Araka ny Baiboly
3.1 I Galilea ao amin' ny Testamenta Taloha
3.2 I Galilea ao amin' ny Testamenta Vaovao
Ny teny hoe Galilea na Galilia dia avy amin' ny teny hebreo hoe הגליל / Ha-Galîl, izay midika hoe "ny faribolana" na "ny faritra". Amin' ny teny arabo izy dia atao hoe الجليل / al-Jalîl, izay mitovy dika amin' io ihany.
Ny Ranomasin'i Galilea hita avy any amin'ny Kineret Moshava
I Galilea dia tangoron-tendrombohitra be vato ao amin' ny tapany avaratr' i Israely. Ny tendrony avo indrindra dia ny tendrombohitra Merôna, izay mihoatra ny 1 200 m. Antonony ny maripanany sady manana rotsakorana izay mamelona ireo renirano vitsivitsy ampiasaina amin' ny fambolena. Mandrakotra ny iray ampahatelon' ny velaran-tanin' i Israely i Galilea, avy any Dana any avaratra, am-pototry ny tendrombohitra Hermôna, hatrany amin' ny tendrombohitr' i Karmela sy i Gilbôa any atsimo, ary avy any amin' ny lohasahan' i Jôrdana any atsinanana hatrany amin' ny moron' ny Ranomasina Mediteranea any andrefana, ka mamakivaky ny lemak' i Jezrela sy Ako.
I Galilea ao amin' ny Testamenta Taloha[hanova | hanova ny fango]
Tsy voaresaka ao amin' ny Pentateoka ny amin' i Galily (Galil). Hita amin' ny endriny milaza maro io teny io ao amin' ny Bokin' i Jôsoa (Jôs. 13.2) sady midika hoe "faritra" na "firenena", ary mety nanondro faritra manokana. Ao amin' ny Boky voalohan' ny Mpanjaka (1Mpanj. 9.11-138) dia voalaza fa natolotr' i Sôlômôna ho valisoan' i Hirama ny lemaka iray ao anelanelan' ireo tendrombohitr' i Naftaly noho ny asa nataony. Nahakivy an' i Hirama izany fanomezana izany, ka nomeny anarana hoe "tanin' i Kabola". Miantso azy hoe Galily (Galil) ny mponina Jodeana (na Jodiana). Ao amin' ny Bokin' ny Makabeo dia toerana nisehoan' ny ady maro teo amin' ny Jodeana sy ny fitondrana seleokida i Galilea.
I Galilea ao amin' ny Testamenta Vaovao[hanova | hanova ny fango]
I Galilea dia voaresaka matetika ao amin' ny Testamenta Vaovao. Ao no nandanian' i Jesoa ny ampahany be amin' ny androny. Ny Evanjely telo voalohany dia mifantoka amin' ny asany amin' io faritra io, izay voasoritsoritra am-panoharana sy feno zava-miafina, ny amin' ny diany rehetra ao amin' ny tapany avaratr' i Palestina, izay voaelanelan' ny fandroahana fanahy ratsy sy fahagagana. Ny andian-teny hoe "Galilean' ny Firenena" (Mat. 4.15, izay noraisina avy ao amin' ny Bokin' i Isaia 8.23) izay atao amin' ny teny hebreo hoe "Galil haGoyim", dia hoatry ny milaza am-panoharana faritra izay tokony hampibebahina, raha mitaha amin' i Jodea sy ny Tempolin' i Jerosalema.
Mety ho sisa amin' ny fitenenana hoe "Fahendren' ny Firenena", ny teny hoe GLYL (Galil na Galilea) sy HKhMH (Hokhmah), izay midika hoe "Fahendrena" ka manana gematria mitovy.
Galilea tamin' ny andron' i Jesoa
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Galilea_(faritra)&oldid=1038658"
Voaova farany tamin'ny 8 Oktobra 2021 amin'ny 09:29 ity pejy ity.